Silsiladdii Guba - Wikipedia
Fiiro gaar ah: Qoraalka halkan ku jira ma ahan mid sax ah oo lagu kalsoonaan karo.
Halkan lama ogola in lagu qoro maqaal aan lahayn cadayn. Bogan waa la tirtiri doona hadii aad tixraac keeni waydo..
Qoraalka hoos ku qoran ma ahan mid u qoran si cilmiyeysan. Hadii aad aqoon u leedahay Ciwaanka qoraalka fadlan Wikipedia ku caawi inaad saxdo qoraalka.
GABAYGAN waxa uu dhexmaray belaha. 1.ISAAQ iyo DAROOD.
Gabayadan sida aad ka warqabto waxaa billaabay Cali-dhuux Aadan Goroyo, isaga ayaana soo afjaray. Wuxuu ku billaabay gabaygii ay ugu horraysay:
-  Doqonkii Ogaadeen ahaa, Doollo laga qaadye
-  Loo diid Dannood iyo hadduu, degi lahaa Ciide
Wuxuuna kusoo gunaanaday gabaygii gaabnaa ee isna ku bilaaban jiray
-  Gunbaan ahay ganbo cad baan xidhnahay, iyo gar naagoode
-  Gashaantimaha sidoodoo kalaan, guur u sugayaaye
-  Anigiyo hablaha loo galmoodo, waan gudboonahaye
-  Jeeroon ganboolka iska rido, guudka iga saaran
-  Ogaadeenka noo soo gabyow, waa gar xaajaduye
Ugu horrayn, gabayada kale ee laga horraysiiyo ama laga dambeysiiyo labdaa gabay ee Cali-dhuux ka mid ma aha silsiladda. Way dhici kartaa inay ku lug leeyihiin khilaaf dhex maray laba qoys oo kuwa isu tiriyey gabayadan ka mid ah, laakiin taa macnaheedu ma aha in ay silsiladda ka mid yihiin.
Haddaba, gabayada laga yaabo inaad Guba u maqashay way ka duwan yihiin Gubada rasmiga ah. Waxaa gabayada magacan sida dhabta ah u leh isu tiriyey 13 nin oo dhammaantood Ogaadeen ah. Waxaa nimankaa ka mid ahaa Saahid Qamaan, Xasan Yuusuf, Cabdi Shinni iyo kuwo kale. Meesha magacu ka raacayna waxay tahay tixdii uu Saahid lahaa "In dhawayd wax igu gaarnaan jiriyo, Guba ma faadhfaadhin." Arintaasi waxa ay ahayd iyo wixii la kala mutay ujeedadeenu ma aha inaan halkan raadraacno, waxaan uun dhiraandhirinaynaa magaca Guba halka uu ka soo jeedo iyo inaan gabayadan Cali bilaabay loo aqoonin Guba xilligoodii.
Gabay xaajo ah oo uu Qamaan Bulxan tiriyey isagoo Cali-dhuux tusaalaynaya ayaa waxaa ka mid ah beyd uu lee yahay "Geeraarka iyo faanku saw, Guba la xeer ma aha" Arintaasi waxay tusaale cad u tahay in Qamaan, Cali, iyo dhamaan abwaanadii ka qayb qaatay gabayadan iyo ciddii xilligaas maqashayba aysan Guba u aqoonin uguna yeedhin. Beydkaa Qamaan ee uu magaca Guba ku xusay ayaa dad badan oo aan suugaanta ehel u ahayn ku dhaliyey inay silsiladdan Guba ugu yeedhaan.
Waxaa kale oo la wariyey in Cali markii uu tiriyey gabaygiisii 1aad ee la magac baxay “Diradiraale” uu nin ka ag dhawaa dadkana kala yaqaanay waydiiyey "war maansadu maansadii Guba ee Saahid Qamaan Cali ma u eg tahay?" Wuxuu ninkii ku jawaabay ma hayno, waxaase halkaa ka cad in Cali Dhuux tix raacay kana luunjeexday abwaankii caanka ahaa ee Ciid iyo Doollo, Saahid Qamaan. Waxaa kale oo halkaa ka cad in Cali uusan magac u bixin maansadan uu billaabay, kaliyase uu weydiiyey saaxiibkiisii markaa ag fadhiyey bal in maansadu tii Saahid la nooc tahay.
Cabdullaahi Xasan Rooble ninka la yidhaahdo, ama jaahilnimo uusan aqoon fiican u lahayn waxa uu ka hadlayo ha curyaamiso, ama qabyaaladi ha indha duubto, booklet kii uu ugu yeedhay Silsiladda Guba xaqiiqooyin iyo gabayo badan ayuu inkiray, qaarna wuu is dhaafdhaafiyey oo uu isku car-iyo-bay gooyey. Ujeedadeenu ma aha inaan bookletkaa naqdino, umana arko inuu mudan yahay in waqti lagu lumiyo mar haddii uu ammaanadii cilmiga ku tuntay. Waxaan ujeedaa uun inaan soo qaato meel yar oo uu kaga hadlay asalka magaca Guba, dad kale oo badanina hadda ka hor ka hadlay, mar haddii aan magacaabayna inaanan xusin eexda raqiiska ah ee ka buuxda sadarada ninkaasi qoray way ila ahaan weyday. Meeshaasi waxay tahay, Cali-dhuux oo ergo ah ayaa ka dabatagay geel ay niman Ogaadeen ahi ka dhaceen qolo Dhulbahante ah. Waar geela noo celiya ayuu yidhi? Kolkii geelii loo celin diiday ayuu gabay mariyey. Gabaygaa waxaa ka mid ahaa:
· Guboo kale haddii aan tirshoo, nimanka guubaabsho · Nimay guuli raacdaba wallaa, laysu gelayaaye · Iyadana hay garanwaayinee, geela igu siiya Gubada uu halkan ujeedo waa Ogaadeen dhexdii ka dhacday ee ma aha tan uu isagu bilaabay ee aan halkan kaga waramayno. Mar haddii uu isaguba yidhi maansadu Gubadii Saahid Qamaan ma u eg tahay, ma dhici karto in tan kale ee uu billaabayna uu Guba ugu yeedho. Markuu leeyahay "Guboo kale haddii aan tirsho" waxaa cad inuu tixraacayo dhacdo iyo gabay(o) hore.
Magaca Guba aad ayuu u xeeldheer yahay. Wuxuu macnihiisu ku qotamaa ciil iyo cadho iyo arin ay rag badani gurracayaan, Saahid Qamaana si kale ugu muuqatay. Dabadeed uu lee yahay hurgumo iyo caloolyoow badan oo in badan igu gaaxday ma anigaaba nimanyahow daboolka ka qaaday. Tan kale ee ay la garab ordayaan Silsiladdii Guba waa diradiraale aan macno badan ku fadhiyin.
Maahmaahdii Soomaaliyeed ee odhan jirtay 'xaajo nin aan ogayn indhuhuu ka ridaa' ayaa munaasab ah. Waxaan uga gol leeyahay, markii gabayo laga tiriyey Doollo iyo Ciid ay tagaan meel kasta oo caalamka ka mid ah oo Soomaaliyi ku nooshahay, isla markaana ay jiraan dad si gurracan u marinhabaabiya suugaanta iyo taariikhdeeda, waxaad iska garan kartaa in ay adag tahay in la ilaaliyo nasabkii iyo asalkii silsiladda. Aqoon xumo iyo eex, dan gaar oo ku dhisan nin ay doonayaan meel uusan gaadhin inay gaadhsiiyaan iyo isku dhererin abwaano kale ayaa ku xambaartay inay silsiladda indhaha ka tuuraan. Magaceeda, gabayda qaarkood iyo taariikheeda oo dhan ayey kufsadeen.
Isku soo duuduub oo silsiladdan Guba lama yidhaahdo, kuwa magacaa ugu yeedhana waxay isku dayayaan inay magaca boolyadaan. Guba waxaa ah sheekadii iyo 13 kii gabay ee Ogaadeen dhexdii ka curtay, Soomaali kalena aan wax lug ah ku yeelan. Haddaba, halkan wixii ka dambeeya qoraalkan dhexdiisa waxaan silsilddan ugu yeedhaynaa magaceeda dhabta ah oo ah Rayad. Sidii tuug dharaar la qabtay, turuqgooyo intaasi ha u noqoto kuwa magaca inay taxaabaan damacsan.
Xaggee Lagu Tiriyey Rayad?
Silsiladda Rayad waxaa laga tiriyey dhulka lagu magacaabo Doollo. Doollo waa dhul xoolo daaqeen ah oo geelu aad ugu tanaado hase yeeshee oomane ah. Ceelasha laga cabaayi waa fara kutiris. In la qodo oo biyaha sidaa lagu gaadhana way adag tahay waxayna qaadataa muddo dheer iyo maal badan. Oonka ka jira Doollo ayaa sabab u ahaa bilowga maansadan, sida aan dib ka cadayn doono.
Doollo waxaa laysku yidhaahdaa todoba ceel oo kala ah Walwaal, Wardheer, Uubataale, Waa-Af-Dhuug, Garlow Gube, Yucub, iyo Af-Yaraado. Dhulkaasi wuxuu dhacaa inta u dhaxaysa Wardheer, Caado, Qabri Dahare iyo Shillaabo, markii si wareeg ah loo eego, caasimadna waxaa haatan u ah Wardheer. Dhulkan dhamaantii waxaa dega Ogaadeen. Waxaa jira laba ceel oo xad ay qabaa'il kala duwan iska taabtaan ah, qabaa'iladdaa oo isugu jira dhawr kale oo isla Daarood ka ah.
Waxaa ceelasha Doollo biyaha lagagala soo baxaa wadaan ay jiido labo ama afar nin iyadoo mar walba ay ku xidhan tahay hadba culayska wadaanta. Tusaale ahaan ceelka Geel Caddeeye la yidhaahdo ee ku yaala degmada Yucub oo ah ugu yaraan saddex iyo toban baac - nin joogii- waxaa inta badan lagaga cabbaa wadaan laga sameeyey laba neef oo adhi ah haragood. Waxaana uun jiidi kara wadaantaas oo buuxda afar nin oo xoog badan oo labo labo intay isu daba istaagaan dhinacba mar dhufto.
Oonka caynkaa ah waxaa sii adkeeya Doollo oo ay xooluhu aad ugu badan yihiin sababtoo ah waa carra san ah, qaniinkunu wuu ku yar yahay. Waxaa, sidaa daraadeed, dhacda in dad badani kusoo raro nimcoolayda ay haystaan markii ay barwaaqo jirto. Barwaaqadii markii ay gabaabsido ee biyihii dhulka banaan wadhnaa ay yaraadaan ayaa dib loogu noqdaa ceelashii iyo in dadka iyo xooluhuba ku tiirsanaadaan wadaantaa la shubayo.
Biyo yaraantaa, carro fiicnidaa iyo cid badnaantaa ayaa waxay inta badan dhalisaa khilaaf dhexmara beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed ee ku kulma degaanadda Doollo ku hareeraysan. Haddaba khilaafka ay Silsiladda Rayad salka ku hayso waa mid noocaa oo kale ah.
Sidaan kor ku xusnay, Cali-dhuux ayaa billaabay gabayadan. Wuxuu joogay marka uu tirinayo gabaygiisii ugu horeeyey ceelka Walwaal. Neef geel ah oo uu watay ayuu damcay inuu ka balaliyo ceel nin kale ka cabayey. Ninkii ceelka ka cabayey ayaa u diiday oo sida la wariyey ugu jawaabay hadal macnihiisu ahaa: geelayga oo aan fulin wallaan neefkaa ihi miiganaynin. Cali inuu dulqaato oo uu kalkiisa sugo, inuu ninka ceelka ka cabbaya iska sasabo oo uu u af-miinshaareeyo, inuu isagaba tago oo uu ceelasha kale biyo ka daydo, iyo inuu wax isku diradireeyo oo uu dab ka dhex afuufo dadka wada nool ee xigaalo iyo xididba leh ayey midood u ahaatay. Wuxuu doortay tan dambe oo horseeday inuu tiriyo gabaygiisii ugu horreeyey.
Haddaba la isu gabay oo la isu faan. Dadka qaarkiina sida Qamaan Bulxan maslaxo iyo islaax isku daye inay ka shaqeeyaan. Arintuse maxay ku dambaysay markii taariikhda iyo gododkeeda dib loo rogrogo?
Waxaa muhiim ah inaan caddayno cidda isu gabyeysa iyo siday isu kala ood xigeen. Guud ahaan waa dagaal gabay oo dhexmaraya Ogaadeen, Dhulbahante, iyo Isaaq. Ogaadeen iyo Dhulbahante waxay isku yihiin Kablalax, Daarood. Haddaba haddii abtir ahaan ama sidda ay qabaa'ilka Soomaliyeed maanta u kala yaalaan la eego, waxay ku haboonaan lahayd in la yidhaahdo waxa isu gabyaya waa Darood iyo Isaaq. Laakiin sidaa xaalka dhabta ahi ma ahayn. Laba reer oo Daarood ah, Ogaadeen oo dhinac ah iyo Dhulbahante oo dhinac ah, oo midba midka kale Isaaq ku riixayo oo uu lee yahay lagu dhac oo waad fara madoow dahay ee wax iska dhici ayey maansada badankeedu ku caano shubanaysay.
Haddii dhinac kale laga eego, waxaa lagu doodi karaa Isaaqba uma dhanayn gurdanka iyo geeddanka meesha ka socday ee waxaa uun deegaanka lagu wada hadlayo ka dhawaa waa Habar Yoonis, Ciida Gale, Arab iyo Habar Jeclo.
Gabaygii Cali Dhuux gar iyo gardaro mid uu ahaaba dhac oo saddexda dhinacba laysu gabay, Silsiladdii Rayadna fatahday. Maxay ku dambaysay haddaba? Bal tusaalayoow dhawr ah oo ina tusaya ugu dambayn xaalku sidduu ku basbeelay aynu soo qaadano si aynu si kama dambays ah u buddhigno dooda ah hebel baa badiyey, reer hebel ayaa dhulkiisii la dhacay, anagaa wax digo iyo dambas ka dhignay, iyo sadbursashada noocaa ah ee dhinacyada ku loolamayey maansadan dhexdeeda mid walba soo qadimo. Waxaa aad muhiim u ah, akhristooy, inaad xusuusnaato in Silsiladda Rayad ay ku socotay sababteeduna ahayd dhul la sheeganayo in la kala dhacay oo ciddii lagu yaqaanay xoog lagaga hantiyey. Haddii aadan muhiimadaa hadda arag, dib ayaad ka fahmi doontaa markii aad hoos usii raacdo qoraalkan.
Dhulka Umuuqda in Laysku Haysto
Gumaysigii Ingiriisku markii uu maquuniyey ciiddamadii xag u dirirka ahaa ee Daraawiishta, xaruntii Taleexna ku weeraray diyaarado aan waqtigaa ka hor lagula dagaalamin dhaqdhaqaaq kale oo Afrikaan ah, ayaa wuxuu bilaabay inuu isku balaadhiyo dhulkii ay Soomalida Daraawiishta gacan saarka la lahaydi ku noolayd. Wuxuu kaloo bilaabay inuu ciqaab ahaan u riixo geeskana u galiyo qoys walba oo Daraawiishta xidhiidh hoose la lahaa ama lagu tuhmayey inuu la lahaa. Waxaa caddaatay in Ogaadeen oo Sayidku ka dhashay taakulo joogta ah oo kale duwanna Daraawiishtu ka heli jirtay, iyo Dhulbahante oo Sayidka reer abtigii ahaa, badhkiina Daraawiishta raacsanaa ay noqdaan caddowga koobaad ee Ingiriis iyo qabaa'iladdii raacsanaaba ay wajahaan.
Wuxuu Ingiriisku saanad iyo banaadiikh culus siiyey Isaaq oo isu arkayey in muddo dheer dulmi xagga Daraawiishta kaga socday, Ingiriisna uusan si joogta ah u difaaci jirin. Isaaqu hubkii iyo saanadii gaalku siiyey waxay u isticmaaleen in ay ku hujuumaan Dhulbahante iyo Ogaadeen oo ay u arkayeen inay meelo badan ku haalufeeyeen iyagoo Daraawiishi naasnuujinayso.
Waxaa tusaale u ah hubkaa Ingiirku ku tabbacay Isaaq iyo wareemaysigii dabasocdayba tuducyadan soo socda:
Iidoor Dir weeyee hadduu, duullaan soo bixiye
Dunji Habar Magaadluhu hadduu, dabarka soo gooyo
Dunbuq iyo rasaastii hadduu, Debecsanuhu siiyo (gaalku)
Horta yaa la da'a wayla yaab, dawyadaad xuliye?
Maxamed Cumar Dage:
· Haddaan gaalku noo dilin Isaaq, dalab ma maaleen dheh
Layliga laxaad lihi haween, waa luggoyn jiraye
Haddii aan nin ragi loodinayn, dumar ma liicshaane
Leeleeshe gaaladu haddaanay, kugu lamaanayne
Adba ilama aad loolanteen, oo Lillaahiya e
Libna iga-walaad haysateen, Ladanna maasheene
Wuxuu yidhi Jaamac Xirsi Guuleed (Isaaq) isagoo Cali Dhuux u jawaabaya weerarada Isaaqna u cudurdaaraya:
Dagaal iyo dhac waa loo ogaa, duul shisheeye ahe
Iyaguba kun jeer bay dunsheen, dawladda Isaaqa e
Wuxuu lee yahay maxaad Ogaadeen noogu guubaabinaysaa Caliyoow? Saw waligeed annaga iyo Ogaadeen dil iyo qaad nooma ahayn? Sawse iyaguba kun jeer nagama lug-meersan hadda ka hor. Maxaad taa u arki la'adahay?
Margaret Laurence buuggeedii ahaa A Tree for Poverty ee ay kaga warantay taariikhda gabayada Soomaliyeed ayna ku sifaysay in gabaygu Soomaalida u yahay geed weyn oo doog iyo diraacba hadh qaboow leh oo ay Soomalidu ka hadhsato gaajada, collaada iyo rafaadka reer-guuranimadu lee dahay, waxay ku qortay iyadoo ka hadlaysay colaada Ogaadeen iyo Isaaq dhexmari jirtay xilligaa una markhaati furaysa Jaamac Xirsi beydadkiisaa sarre:
The Ogaden are a section of the Darod Somalis, and live close to Ethiopia. They are famed for their warlike spirit, and they still attack and raid the Ishaak [sic] Somalis. Their nick-name is "Libahh" (lion).*
Ogaadeenku waa qoys ka mid ah Daaroodka Soomaaliyeed waxayna deris la yihiin Itoobiya. Waxay caan ku yihiin dagaalyahanimo xammaasad leh ilaa iyo haddana waxay weeraraan soona dhacaan Isaaqa Soomaaliya dega. Waxaa lagu naanaysaa Ogaadeenka Libaax.
Maxamed Cumar Dage isna waa kii lahaa isagoo ka hadlaya jab ay Abraahiin, Ogaadeen, u gaysteen Habaryoonis, Isaaq, kadib markii Habaryoonis weerar kadiso ah soo qaaday hase yeeshee guushii ku dambaysay Abraahiin:
Rag haddaad dakano kala qabtaan, dil iyo qaad gaadhay
waa lagu digtaa maalintay, xagashu daacdaaye
Doollo iyo warkii Bari, waan ku diirsadaye
Waa kaan dabaaldagay markay, soo dawariyeene
Iidoor dulliga gaadhay waa, roob gu' oo da'aye
Daarood Ismaaciilna waa, u doogsin galabeede
Samatar Baxnaan (Dhulbahante) waa kii lahaa isagoo ka hadlaya colaadda guunka ah ee ka dhaxaysa Isaaq iyo Dhulbahante:
Xasan iyo anoo sida Siciid, la i xambaaraayo
Iyo haatan xaaddii gadhkoo, xayga ka caddaatay
Xabbad iyo dil bay noo ahayd, reer Xirsi Cismaane
Soo koob oo saddexdan qabiil waligood dirir iyo waxaa ka dhaxaysay xurgufo joogta ah. Marar badan oo si nabad ah loo wada noolaa oo aan dhibaato jirin dadkuna daris wanaag iyo isxaan kuwada degan yahayna way jirtay. Run ahaantii, mararkaa dambe ayaa badnaa. Hase ahaatee, qabiil Soomaliyeed oo qabiil kale ka adkaa ma jirin. Midba marbuu wax isbidaa oo ka kale ka yara tugtug roonaadaa, laakiin qabiil si joogta ah u muquuniyey ama u muquunin kara qabiil kale ma jirro lamana sheegin taariikhda Soomaalida.
Haddiise aan u kuurgallo dhulka gabayada la mariyey ee ragga gabyey ay sheegeen in la kala dhacay, waxaa inoo caddaan doonta maanta cidda degen ee ku nool laguna yaqaano. Waxaa kaloo inoo muuqan doonta ciddii gabyaagu sheegay in laga xoogay, ciddii lagu sheegay inay xoogtay, iyo haddii uu jiro qoys dhulkii lagu yaqaanay ka maqan oo tabar darro daraadeed soo dhacsan waayey.
Doollo, Dannood, Ciid, Daratoole, Faafan, Doh, Wardheer, Cammuud, iyo Walwaal ayuu Dhulbahante sheegay in Ogaadeen laga boolyaday oo Isaaq dhac badheedh ah ku qaatay. Waakii Cali Dhuux gabayga mariyey:
Doqonkii Ogaadeen ahaa, Doollo laga qaadye
Loo diid Dannood iyo hadduu, degi lahaa Ciide
Daratoole iyo Faafan oo, wada duraabaaya ...
Alla Dawguduudii Wardheer, kama durduurtaane ...
Darar kagama maalaan Cammuud, diiqo iyo xoore
Maantana dukaamaa la dhigay, dagalkii Gaafowe ...
Doox iyo Doh iyo Faafan, way soo dalbanayaane
Dhamaan dhulkaa Cali Dhuux uu carrabka mariyey, raggii kale ee Dhulbahante ee silsilada ka qayb qaatayna in badan kusoo celceliyey iyagoon wax cusub ku darin, waxaa dega Ogaadeen badankiisuna waa gudaha degaanka Ogaadeen. Waxaa dhinac walba kaga xeeran degaan kale oo Ogaadeen leeyahay. Haddii uu akhristuhu juquraafiga dhulka yaqaano si dhib yar ayuu arintaa u hubin karaa.
Maxamed Cumar Dage isagoo u jawaabaya Cali Dhuux iyo gabyaagii kale ee Dhulbahante waa kii gabayga mariyey dhamaan dhulkaa aan soo sheegnay qaar kale oo ka shisheeyana u sheegay in uu degaan Ogaadeen yahay. Wuxuu yidhi:
Ogaadeen Dannood iyo Digiyo, durugsay ceelkii dheh
Iidoor dalaalimo ka waa, Doollo iyo Ciid dheh
Daratoole iyo Faafanbaa, daakhilkii yahay dheh
Deegaanta Iligeedna waa, dagal Makaahiil dheh
Daris nimaan ku jooginina waa, daaqi Xodayood dheh
Wuxuu meel kale ku yidhi Maxamed Cumar Dage:
Ogaadeen xaqqii laga hayiyo, saa'id buu helay dheh
Hurre wuxuu ganbiyey hayb dhan oon, hali u foofayn dheh
Togga Hulan hundaha Ceeliseed, Harada Gaaroodi
Haruun Maxaadaar halkuu, halab ku beeraayey
Hogga Buduxle hoosada bankiyo, Halale meeshiisa
Heeshiga Wardheer iyo Dannood, Harasan guudkeeda
Hiyigii ku beenoow intay, ugu hawoodeen dheh
Gabogabo kob aan lagu hantiyin, heelka laga waa dheh
Dhinaca Dhulbahante, gabayaagii Ogaadeen waxay gabayga mariyeen dhulal badan oo lagu yaqaanay deegaanna u ahaa Dhulbahante hase yeeshee Habar Jeclo iyo Habar Yoonis ka fara-maroojisatay, Daaroodka kalana aad uga xunyahay demenaanta Dhulbahante. Waxay hal-abuurada Ogaadeen kusoo celceliyeen in badana Dhulbahante ku dhiiri galiyeen in ay mar uun dib u qabsadaan Caynaba, Ceel Dhaab, Harrada Badwey, iyo howdka xoolla daaqeenka ah ee u dhexeeya Burco iyo Buuhoodle. Bal aynu tusaale usoo qaadano dhawr tixood
Idinkuba darkii Caynabaad, deris ku taalliine
Dagaalama rag doorkii la laa, duub caddii Hagare
Ama nadaaya waan wada qabnaa, daawasho iyo ceebe
Idinkaa dalkiinii u huray, Habar Xabuusheed dheh
Hanbaraacin mooyee horraad, uga hagaagteen dheh
Garaad Faarax goortay hanteen, haatan ma ahayn dheh
Hanan weyde heelkii Badweyn, haradii Ceel Dhaabe
Ka huleeshe Howdkii sarre iyo, haatan Caynaba e
Nimaan Habar Jecliyo Muusayoow, uga hagaagaynin
Inuu dhoodi hoos ugu dhacoo, haniyo weeyaane
Dhulkaa dhammaan waxaa dega Habar Jeclo, Muuse Ismaaciil, iyo Muuse Carre oo labaduba Habar Yoonis ah. Taariikhda dhulkan qaarkii Soomaalidu aad ayey ula socotaa maxaa yeelay waxaa jirta odhaah tidhaahda "Lixdan jirka Dhulbahante iyo labaatan jirka Habar Jeclo yaa Caynaba ugu garqaadi doona" Odhaahdu waxay daaran tahay ninka lixdan jirka ah ee Dhulbahante wuxuu ogaa soona gaadhay Caynaba oo magaalo tolkii ah siddii ayaana wali ku qufulan tabari waa halkeedee. Labaatan jirka Isaaqna wuu ku dhashay isagoo Caynaba dhextaagana wuu is arkay, marka waxba uma uu qirsana, Dhulbahante inay meesha qor ku leeyihiina uma uu arko.
Cali Dhuux markii uu arkay inuusan wax libin ah haynin, Ogaadeen oo uu isagu gabayga la doontayna gabay ku xujeeyeen, dhulkii uu sheegay inuu ka maqan yahayna arkay inuu daakhilka degaanka Ogaadeen yahay, Qamaan Bulxan, Maxamed Cumar Dage, iyo aftahanadii kale ee Ogaadeena ay libin ku geeraareen, tolkiina uu ka quustay inay ceebta iska qaadaan ayuu badheedhihiisii caddaystay. Wuxuu gaadhay halkii (maahmaah dumareed) ay haweenaydii ku tidhi yarkii ay dhashay "ku qariyey oo ku qariyey ee labaatan jir" Macnuhu waa idiin ceeb qariyey, oo afka idinku weyneeyey, oo idin difaacay laakiin wax dambe oo aan qariyaa ma jiro ilaa aad Isaaq meel iska marisaan. Wuxuu yidhi isagoo marna calaacalaya marna dan sheeganaya:
Gunbaan ahay ganbo cad baan xidhnahay, iyo gar naagoode
Gashaantiyaha sidoodoo kalaan, guur u sugayaaye
Aniga iyo hablaha loo galmoodo, waan gudboonahaye
Jeeroon ganboolka iska rido, guudka iga saaran
Ogaadeenka noo soo gabyoow, waa gar xaajaduye
Markii Ogaadeen dabacsanaanta Dhulbahante farta ku fiiqay, Caynaba, Ceel Dhaab iyo dhulalka kale ee ka maqanna gabayada mariyeen, markii ay Xaaji Cumar Cameey oo ahaa nin Dhulbahantuhu aad u jeclaa, markuu hadlayana sida la sheegay odhan jiray anigan Daarood ah, iyo Axmed Cige Sii'arag oo isna nin qiima badan ahaa ay Dhulbahante u aari waayeen, ayuu Maxamed Cumar Dage wuxuu taladii ku gooyey inuusan Dhulbahante dagaal dambe ku jirin, dullinimo ay qaayibeen, Isaaqna siduu doono ka yeelay. Kolkaa ayuu Hartiga kale dacwo ahaan, iyo bal inay u miciinaan warka gaadhsiiyey. Wuxuu yidhi:
Warsangali u mari yaan Hartiga, gabalkii moogaane Majeerteen u sheeg xaajadaa, waa mashaqo weyne Maxamuud Saleebaan u mari, madaxyo weyntiisa... Bal inay dhabliga meeriyaan, aad u maqashiiya Haddaba haddii aynu soo koobno qaybtan ah dhulalka la sheegay in la kala qaatay, dhulka guud ahaan Illaahay (sw) baa leh, Soomaliduna waligeed waa wada daaqdaa wadana degaan. Haddii nin meeshii lagu yaqaanay ka maqan ama laga durkiyey uu jiro sidda Cali-dhuuxba qirtay ninkaasi waa Dhulbahante. Wixii intaa aan ahayn ee la sheego waa denbi iyo been.
Cali Dhuux Ma Diradiraaluu Ahaa?
Cali Dhuux Aadan Goroyo oo ahaa ninkii billaabay Silsiladda Rayad soona gabagabeeyey ma wuxuu ahaa nin diradiraalaynta caadaystay oo caan ku ahaa mise waa xadgudub in lagu tilmaamo diradiraale? Raggii Cali la macaamilayse sida kuwa silsiladdan ku jira iyo kuwii kale ee xilliggiisii noolaa maxay ku tilmaameen?
Waxaa adag in aad akhriso ama dhagaysato gabayada Cali Dhuux, sida gabayada dhawr ka ah ee uu ku leeyahay Silsiladda Rayad, islamarkaa aad arki weydo isku dirka iyo naar-afuufnimada sida cad ee qayaxan uga buuxa. Dadka sida dhexdhexaadka ah u qiimeeya suugaanta Soomaaliyeed waxay qireen in ujeedo kale oo uu ka lahaa billowgii gabaydan aysan jirin, jirina karin. Dadka fikirka noocaa ah qaba waxay isugu jiraan cid walba. Xataa waxaa jira kuwo badan oo Cali la reer ah.
Markhaatiga ugu habboon ee aan diradiraalaha Cali usoo qaadan karo waa gabayadiisa iyo taariikh suugaaneedkiisii. Mar uu Ogaadeen dhexdii isku diro, mar uu Dhulbahante dhexdii isku diro, mar uu Daraawiish iyo Soomaali isku diro iyo mar uu Ogaadeen iyo Isaaq isku diro ayuu cimrigiisii ku idlaystay.
Axmed Faarax Cali Idaajaa oo ah suugaanyahan Soomaaliyeed, kana mid ah ragga Cali Dhuux iyo halabuurnimadiisaba aad u buunbuuniya ayaa barnaamij uu leeyahay 2003 BBCda laanteeda Af-Soomaaligu soo daysay. Barnaamijkaa dhexdiisa wuxuu Idaajaa ku tilmaamay in Rayad ay diradiraale buuxa ahayd. Wuxuu yidhi Idaajaa “10 sano waxaan dhamayn haddii silsiladdaa iyada ah laga joogo (silsiladdii Haameey/Halac Dheere ayuu ujeedaa) ayuu Cali Dhuux wuxuu billaabay silsiladda waayadii dambe iyaduna Guba la baxday ee diradiraalaha ah ee Soomaali ka tilmaaman.”
Haddii aan joogaha warkiisa dayno bal aynu tusaale ahaan usoo qaadano dhawr tixood oo ay tiriyeen rag xilligii Cali Dhuux noolaa aadna u yaqaanay shaqsiyaddiisa. Raggani dhammaan waxay ka qayb qaateen silsiladdan saddexda dhinacba qaarkoodna Cali ayeyba la safnaayeen.
Ismaaciil Mire oo Cali Dhuux la qoys ahaa dadna ugu yaqaanay ayaa kula dagaalamay diradiraynta iyo fidmo wadid uu hadba dadkoo nabad uyaala aafo iyo utun la doono (afarta beyd ee hore.)  Waxaa kale oo Ismaaciil gabaygan dhexdiisa ku xusay in Cali garasho gaaban yahay  iyo inuu yahay nin aan aad u aqoon sarbeebta gabayga (afarta beyd ee dambe.)  Wuxuu yidhi:
Dabkaad hurisay Cali Aadanow, dogobbadaad oogtay Dambaaburadaad ololisiyo, dirirta guusheeda ... Kumana diirsan maansadu hadday, dunida aafayne Duunkaaga kuma suubbanayn, diradiraaluhuye Allay lehe denbaab lama hadlee, kulama doonayne
Dalkoo nabad ah baad uumiyaha, belo la doontaaye... Dammanaansho nimankaad biddaye, doqon ku sheegeysey Cawlkii la dabay oo mindida, dabaxda loo waayey Oo qoday birtii lagu deg-dhabay, kuugu duurxula'e Allay lehe dubbuur kugu danniyay, waaba kuu digaye
Qamaan Bulxan oo Cali aad u or iyo odhaah yaqaanay ayaa isna dusha ugu shubay wax nin weyn lagu sheego tii ugu xumayd oo ah colaad iyo cillad abuur uu Muslinka kula dhex wareegaysto. Wuxuu yidhi Qamaan:
Dabbaad ololisaa kumana gubo, daa'in abidkaaye Intaad dogob shiddaa baad taqaan, dirdirayn jaane Daaskaad fadhido saw gubee, degelkan qiiqaabi
Buraale Cali Ubaxle isna wuxuu si cad ugu waafaqay Ismaciil iyo Qamaan oo aad moodaa inay is uur ogaayeen. Buraale wuxuu ahaa nin ehlu diin ah wuxuuna in badan Ogaadeen kula dardaarmay inaysan dad masaakiin ah u laynin godobo ay gaysteen kuwa daba dhilif ah oo Ingiriisku ku adeegto oo uu u isticmaalo dabargoynta ummadda Soomaaliyeed si uu isagu dhex ku bari u noqdo. Wuxuu yidhi Buraalana:
Waa iga da'weyn yahay ninkaa, dirirta oogaaya,… Da'day maaha reer nabad ahoon, diradireeyaaye
Ismaaciil Cigaal Bulaale oo Cali Dhuux seedigii ahaa isna sidii abwaannadii horre ayuu Cali sifadii iyada ahayd ku sheegay isagoo waliba xusuusinaya diinta Islaamka iyo garashada Rasuulka (csw). Wuxuu yidhi Ismaaciil:
Nin da'yari dambaab iyo ha galo, diradirayntaase Diintii Rasuulkiyo haddaad, daacadda ujeeddid Oo aadan dariiqada ka bixin, duudkii Nabi Aadan Oo madaxu deebtaa ku yahay, waa digniin dhab ahe Sidee baad dawaar ugu rogtaa, dunida geestaada?...
Adaa Dir iyo Daarood dhex dhigay, dab iyo baaruude Dacar gelisey reerihii ahaa, ul iyo diirkeede Mugga haatan dirir uumiyuhu, waa is dilayaaye
Salaan Carrabeey isna halkii ay nimankii horre mareen ayuu maray oo waliba baac usii dheereeyey. Waxaa ku cusub tixdan Salaan oo isku hal gabay ka soo jeedda ammaarado foolxun oo ay ka mid yihiin faanka, hinaasaha, hibashada, iyo hanfadanimo uu Cali ku sheegay isagoo ku soo gabagabeeyay diradirayntii abwaanidii kalaba carrabka ku dhufteen.
Bal inuu hanfade waalan yahay, habi la'aantiisa Hadmuu ku hirtey Cali Yuusufkuu, humay colaadiisa?
Dadka kale tashiga waa hojaa, kay hadhaw noqone Waxaanu hubsan reer Cali Geraa, haa dhawaan jiraye Dabkaad hurin habeen iyo dharaar, holocyadaad oogi Halna kuma xereyside dadkaad, ku hawaraysaaye Aduunbaase hor Eebbiyo la tegi, hollacii naareede Iska hadhaye aakhiraba waa, lama huraankiiye
Mar kale Salaan isagoo Cali la hadlaya ayuu beydadkan hoose mariyey. Beydadkani waxay daliil u yihiin oo kale laba qiso oo ay midi Cali Dhuux iyo Reer Hagar dhexmartay, midna isaga iyo Reer Cali Yuusuf, Reer Cabdille, Ogaadeen dhexmartay.
Rabbaa wacad gondaha kuugu xidhay, waadna gogataaye Adunbaa geyiga uunka yaal, gubaya waa noole Hadba inaad garidda duul ku tumi, galuhu noo keenye Afkaagaaba Geydh lagu diliyo, Gaani berigiiye
Jaamac Xirsi Guuleed, Ina Dubbe, isna diradiraalayntii ayuu Cali si qayaxan ugu sheegay isagoo waliba leh nin weyn baad tahay inaad duleedada ka cido oo aad hadba wixii qalbigaaga kusoo dhaca la yeedho waa ceeb. Haddiise aad dayn weyday isku dirka iyo dab isugu dhiibka ka xaaxaabi adigaa u dhiman doonee. Wuxuu yidhi Jaamac:
Deyn qaadka gabay waa xun yahay, dira-diraaluhuye Duq gaboobay waxa u roon afkii, inu daboolaaye Marse haduu duleeddada ka ciyo, waa darxumo weyne
Damenaanse Caliyaw rag waa, laga dambeeyaaye Darbo waxaad Islaan kula jirtoo, dab isu dhiibtaaba Dux ka guro dib uun baad u dhiman, duuga weligaaye
Taariikhdu waxay qirtay oo aan ku soo raray carrabyada abwaannadaa kor ku xusan waa in Cali Dhuux Aadan diradiraalaha cid walba ku sifaysay kuna ceebisay, suugaan kale oo arintaa beeninaysa, tiisana ku daroo, ma arag.
Bal halkaa ha inoo qandoodo caawa. Waxaa soo socda qeybo kale oo badan ee ha u deymo la'aanin taxanaha Silsiladdii Rayad.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Silsiladdii_Guba&oldid=193465"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 09:43, 18 Luuliyo 2019.